MR MRT: သိမ့်မွေ့သောလမ်း (၃၀)
တတိယနေ့ - မေတ္တာပွားရကျိုး
(ဟောင်ကောင်၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၉၇)
ဆရာကြီး။ ။ မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ ပတ်သက်တာတစ်ချို့ မိတ်ဆက် ဟောပြောဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ စပ်လျဉ်းလို့ မေးစရာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို သီလရှင်ကျောင်းမှာ ဟောပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ပြောပြီးသားကို ပြန်မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာသာပြန်ပြီး ခင်ဗျားတို့ဆီ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာကို ပြောပါမယ်။ မေတ္တာဘာဝနာရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ အာနိသင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ အကျိုးအာနိသင်တွေရဲ့ လက်တွေ့သဘောတရားတွေကို ပြောချင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ ပထမဆုံး အာနိသင်က ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အိပ်တာနဲ့ အိပ်လို့ကောင်းတာ မတူပါဘူး။ ဒီ အာနိသင်က အေးအေးချမ်းချမ်း နိုးထရတယ်ဆိုတဲ့ ဒုတိယ အာနိသင်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မနှစ်သက်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မမက်ရဘူးဆိုတဲ့ တတိယ အာနိသင်နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။
မနှစ်သက်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေက ဘာတွေလဲ။ အိမ်မက်ဆိုးတွေဟာ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ မွေးမြူထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ဒဏ်ရာတွေကို မေတ္တာနဲ့ ကုစားတယ်။ ဒီတော့ မနှစ်သက်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မရှိတော့ဘူး။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အိပ်ရတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး နိုးထရတယ်။
သီရိလင်္ကာမှာ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့ ရောဂါသည်တွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မအိပ်ခင် မေတ္တာဘာဝနာ အပွားခိုင်းပြီး သူတို့ကို ကူညီပေးရပါတယ်။ အများအားဖြင့် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
အာနိသင် နောက်တစ်ခုက . . . လူတွေက ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြပါတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ လူတွေက ချစ်ခင်ကြတာလဲ။ ခင်ဗျားတို့က သူတို့အပေါ် ဖော်ရွေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ကျပါတယ်။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးအပေါ် ခင်ခင်မင်မင် ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့က ကိုယ့်အပေါ် ပြန်ပြီး ခင်မင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးအပေါ် မခင်မင်ရင် သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို မခင်မင်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ အလွန်ရှင်းတဲ့ အချက်ပါ။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးအပေါ် ခင်ခင်မင်မင် ရှိတယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကလည်း ခင်ခင်မင်မင်ပါပဲ။ ဒါဟာ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ။ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာဟာ သူတစ်ပါအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖော်ရွှေနိုင်မယ်၊ သူတစ်ပါနဲ့ ဖော်ရွေနိုင်မယ်ဆိုရင် မြောက်များစွာသော နှစ်လိုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက . . . လူမဟုတ်တာတွေကလည်း ချစ်ခင်ကြပါတယ်တဲ့။ လူ မဟုတ်တာတွေက ဘာတွေလည်း။ တိရစ္ဆာန်တွေကို ထည့်သွင်းရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှိနေနိုင်တဲ့ မမြင်ရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေတ္တာကို တိရစ္ဆာန်တွေက ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို မေတ္တာနဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တုန်းက ကျွန်တော်ပြောဖူးပါတယ်။ သီရိလင်္ကာမှာ တရားအားထုတ်ကြတဲ့ ရဟန်းတော်တွေဟာ တောကြီးမျက်မဲထဲမှာ အားထုတ်ကြပါတယ်။ တောထဲမှာ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ၊ လူကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ရှိပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေဟာ အဲဒီလို တိရစ္ဆာန်တွေကြားမှာ နေနိုင်ကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ တစ်နေရာမှာတော့ . . . ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က အရိုင်းအစိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေကို စကားပြောပါတယ်။ ဆရာတော် ခိုင်းတာ၊ ဆရာတော် အမိန့်ပေးတာကို တိရစ္ဆာန်တွေက လိုက်နာကြပါတယ်။ ကိုယ်က ကြောက်နေရင် တိရစ္ဆာန်တွေလည်း အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ မေတ္တာတရား ရှိနေတဲ့အခါ၊ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာ တိရစ္ဆာန်တွေလည်း မေတ္တာတရားကို ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။
သစ်ပင်တွေတောင်မှ လူ့စိတ်ကို ခံစားနိုင်ကြတယ်၊ လူ့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို တုံ့ပြန်နိုင်ကြတယ် ဆိုတာကို သူတေသီတွေ သူတေသနလုပ်လို့ သိရှိခဲ့ကြပါတယ်။ မေတ္တာတရားဟာ သစ်ပင်တွေ အပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အပင်နဲ့ သက်ရှိတို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှု ဂေဟဗေဒ အကြပ်အတည်း စတာတွေပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖျက်ဆီးနေပုံကို ပုံဖော်ပြနေတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ မေတ္တာတရား ရှိနေတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်ခံစားနိုင်စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးအောင် လေ့ကျင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနီးအပါး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို နားလည်ခံစားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ အလွန် ရိုးရှင်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်သွယ်မိအောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားနိုင်အောင်လုပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခွဲခြားပြီး မမြင်ပါနဲ့။
နောက် အကျိုးတစ်ခုက . . . မျက်နှာ ကြည်လင်အေးချမ်းပါတယ်တဲ့။ ဒီမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်တွေကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီလို ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ အသွင်အပြင် ပေါ်လွင်အောင် ထုလုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်အခြေအနေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသွင်အပြင် အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာ တည်ကြည်အေးချမ်း နေတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာ မလိုပါဘူး။ ငွေကုန် သက်သာတာပေါ့။ မေတ္တာနဲ့ တည်ကြည်အေးချမ်းတဲ့ အလှမျိုးကို မိတ်ကပ်လူးယူလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်မျက်နှာ တည်ကြည်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်း တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မေတ္တာ အကြင်နာရဲ့ အလှတရား ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာ ကူးစက်သွားတာပါ။ ဒေါသမီး ကူးစက်နိုင်သလို မေတ္တာ အအေးဓာတ်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အကျိုးအာနိသင် တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ ဒါက ဘာဝနာ အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မေတ္တာကြောင့် တည်ကြည်မှု သမာဓိ ရလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာဝနာ ပွားချိန်မှာ ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိဖို့ ကျွန်တော် အလေးအနက် ပြောပြောနေတာပါ။ အားထုတ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်က မုန်းတီးနေမယ်၊ ဆန့်ကျင်နေမယ်၊ တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင် စိတ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဖော်ရွေမှု၊ သိမ်မွေ့မှု၊ ပွင့်လင်းမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အလိုလိုပဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်း လာပါတယ်။ ဘာဝနာ အကျင့်မှာ ဒီအချက်ကို သတိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်လို နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖော်ဖော်ရွေရွေဖြစ်အောင်၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးအာနိသင် နောက်တစ်ခု အကာအကွယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတရားဟာ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေကနေ အကာအကွယ် ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ အကာအကွယ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတာက . . . မေတ္တာဟာ လုံခြုံမှု၊ ရဲ့ရင်မှုကိုလည်း ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ စာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာ တစ်ခုက . . . မေတ္တာတရား လက်ကိုင်ထားတဲ့သူဟာ ဘယ်မှာနေနေ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေရသလို ခံစားရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မေတ္တာစွမ်းအားကြောင့် ကြောက်လန့်တာ၊ မလုံခြုံတာတွေ မခံစားရပါဘူး။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလည်း အိမ်မှာလိုပဲ၊ သူတစ်ပါးနဲ့လည်း အိမ်မှာလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။
နောက် အကျိုးအာနိသင် တစ်ခုက . . . ကွယ်လွန်တဲ့ အခါမှာ မတွေဝေဘဲ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကွယ်လွန်ရပါတယ်တဲ့။ အသိနဲ့ သတိနဲ့ ကွယ်လွန်ရတာကို မေတ္တာရဲ့ အကျိုးအာနိသင် တစ်ခုအဖြစ် ဘာဖြစ်လို့ ထည့်သွင်းထားတာလဲ။ ပြောကြည့်နိုင်မလား။
ယောဂီ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ . . . နောက်ဆုံးစိတ်က ကွယ်လွန်ပြီး လားရောက်ရမယ့် ဘ၀ကို . . . အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်လို့ပါ။
ဆရာကြီး။ ။ တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် မှန်ကန်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသေးလား။
ယောဂီ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ . . . သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်မဆိုင်ဖူးကြတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သေရမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ မေတ္တာတရား ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာကြီး။ ။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ နောက်ထပ် ရှိပါသေးလား။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ဉာဏ်အလင်း ပေါက်မြောက်ဖို့ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။ မေတ္တာတရား ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်၊ သေခြင်းတရားကို သတိနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ရှိပါတယ်။ ဒီ အခွင့်အလမ်းကို ဖန်းတီးတာဟာ မေတ္တာဘ၀နာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိဘက် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရှိပါတယ်။ တိဗက် မရဏကျမ်းတဲ့။ အဲဒီ စာအုပ်ကို တရုတ်ဘာသာ ပြန်ထားလား။
ယောဂီ။ ။ ပြန်ထားပါတယ်။
ဆရာကြီး။ ။ အဲဒါကို ဖတ်ဖူးတဲ့သူ ရှိပါသလား။
ယောဂီ။ ။ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဆရာကြီး။ ။ တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ။ နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ . . . ဘ၀နေနည်းက ကွယ်လွန်ချိန် အတွေ့အကြုံကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်သလို ပြောရရင် . . . ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အထူးသဖြင့် မနှစ်သက်စရာ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ပေါ်လာနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ . . . စိတ်ခံစားမှုတွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိကြတော့ပါဘူး။ သူတို့ ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း ထင်းရှားတာကိုသာ တုံ့ပြန်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ ဘာဝနာ . . . ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ စိတ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို မှတ်မိဖို့၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာ မှတ်မိဖို့၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကို မှတ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက . . . ဉာဏ်အလင်းလည်း ပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှတ်မိဖို့ လိုပါတယ်။ မမှတ်မိရင် နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး လက်လွတ် ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့စကားနဲ့ ပြောရရင် ဘာဝနာ အလုပ်မှာ ကောင်းတဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကိုလည်း မှတ်မိရပါမယ်။ သူတို့ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ သိနေဖို့ပါပဲ။ သူတို့ကို သိတယ် မှတ်မိတယ်ဆိုရင် သူတို့ ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ လွတ်မြောက်စိတ်၊ အလင်းပေါက်တဲ့စိတ်လို့သာ သိနေလိုက်ပါ။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသိရှိတယ် သတိရှိတယ်ဆိုရင် အားလုံးကို သိတယ်၊ အားလုံးကို မှတ်မိတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေတာပါပဲ။ စောစောက ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို . . . ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နောက်ဆုံး အခွင့်အလမ်း ရှိနေပါတယ်။
မွေးမြူထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လည်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သေခြင်းတရားနဲ့ သက်ဆိုင်တာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ ကွယ်လွန်ခါနီး လူတွေနဲ့ ပတ်သက်နေရသူတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ခါနီး ကင်ဆာရောဂါသည်တွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာက . . . မကြည့်မိခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တဲ့၊ ဖိနှိပ်ထားခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေါ်လာတတ်လို့ပါ။ ကွယ်လွန်ခါနီး အချိန်မှာ ဒဏ်ရာတွေက အဲဒီလို အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ပေါ်လာတာ . . . ဘာ့ကြောင့်လဲ။
Posted by Ashin Acara. at 6:25 AM